Tigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beeytuu? – Kichuu
HomeNewsAfricaTigricha Somaaliyaa miila tokkoon dhaabe kana beeytuu?
Maqaan isaa ‘Gabree’ jedhama. Somaaliyaa keessatti Jeneraal Gabree jechuun beekama. Nama Wayyaanee bakka bu’ee Somaaliyaa keessatti ramadameedha. Dhalootaan Tigreedha. Kan Somaliyaa seene yeroo duraatiif bara 2006. Gaafa jalqaba dhufu ajajaa waraana Wayyaanee kumoota hedduu ture. Bara 2006 keessa magaalaa guddittii Somaaliyaa kan taate Muqdishoo qabachuuf jecha, keemikaalota gurguddaa kan akka Foosfarasii Adii ummata nagayaatti darbuudhaan jumlaan fixuu isaatiin ummata Somaalee biratti komatama.
Achi booda hojii diplomaasii fakkeessee magaalaa Muqdishoo teessuma godhachuun baroota inni Somaaliyaa ture kana hunda isatu biyyattii akka fedhe godhee bulcha, maqaaf nama Somaalee of dura kaa’ee; akkuma OPDO fuuldura qabanii ummata Oromoo bulchan, Somaaliyaa keessattis hanga filannoo dheengaddaatti, hoggantoota jaraa kan ajaju Gabree kana.
Aangoo isaa kana cabsanii barana waan nama biraa filachuu danda’aniif, ummanni Somaaliyaa gammachuu daangaa hin qabnerra jiru.
Yoo viidiyoo isaa argitanii jiraattan tahe, guyyaa filannoo Somaaliyaa ammaa kanallee yeroo namoota Wayyaaneen bakka buufattee filannoof dhiheessite gorsu jala deemanii dhoksaan waraabaa turan. Akkasumas yeroo moo’ataman akka malee gadduu isaa bakka galma keessatti ummata keessa taa’ee yeroo gaddu suuraa kaasanii miidiyaarra naanna’aa ture. Yeroo ammaa kana ummanni Somaaliya akka Gabreen biyya isaaniitii bahu gaafacha jiran.
The Daily 202: DNC chair candidates say Clinton lost because she talked